काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो, केकेमा भयो सहज र केकेमा अझै छ कडाई ? (सूचनासहित) « Bizkhabar Online
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो, केकेमा भयो सहज र केकेमा अझै छ कडाई ? (सूचनासहित)
15 June, 2021 8:08 am
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका केही सेवामा सहजीकरण गर्दै आजदेखि असार ७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्ला ९काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर० का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञाको आदेश थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसपालिको आदेशमा भने अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरीद-विक्रीका लागि बिहान ११ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । यसअघि ९ बजेसम्मका लागि मात्रै खुला थियो । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध, डेरीजन्य परिकार, मासु, खानेपानी, ग्यास पसल, किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स (ग्रोसरी मात्र) खुला हुनेछ । स्थानीय ढुवानीका साधन भने राति ९ बजेदेखि बिहान ११ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।